Ọtụtụ n'ụlọ vidio ndị na-ejighị n'aka na oke shaky na-ekiri n'ihi igwefoto kwara a bit mgbe ị nọ ndekọ. Dabara nke ọma, i nwere ike larịị playback gị shaky obere vidiyo site kwụsie ike ha na iMovie. iMovie pụrụ inyere gị aka nyochaa ọ bụla otu etiti na video clip na ozugbo ọ na-achọpụta na a igwefoto ngagharị bụ a bit si mgbe Ndekọ, ọ ga-bugharia gị videos wepụ emee ka anya doo.
Soro ndị a iji na-akawanye gị shaky obere vidiyo site na iji iMovie iji mee ka a ọma n'ụlọ nkiri.
Nzọụkwụ 1. Họrọ a video clip
Họrọ a video clip ma si na Omume nchọgharị ma ọ bụ oru ngo. Ị nwere ike itinye Tụlee maka stabilization dum omume ma ọ bụ dị nnọọ ka obere vidiyo ị chọrọ ide. Ị nwere ike nụ na obere vidiyo na mbụ, na mgbe ahụ ịdọrọ ha ka ha oru ngo ma ọ bụ nụ na obere vidiyo na oru ngo. Ị nwere ike ịga Njikwa> Tụlee Video> Stabilization si iMovie menu ime ka iku video.
Nhọrọ a pụtara na ị chọrọ ime ka iku dum Omume clip, ebe usoro bụ nnọọ mgbagwoju anya na gị Omume clip bụ nnukwu, ọ pụrụ iwe ogologo oge na-akawanye na shaky videos. I nwekwara ike okpukpu abụọ pịa Omume na onye soja na-egosi elu, site ebe i nwere ike na-akawanye dum Omume.
Ọ bụrụ na ị chọrọ iji nyochaa nanị ụfọdụ obere vidiyo na gị na oru ngo, ị nwere ike abụọ-pịa a video clip na oru ngo na-emeghe soja, wee họrọ "Ezigbo clip ngagharị."
Nzọụkwụ 2. Malite kwụsie ike na shaky videos
Mgbe iMovie amalite nyochaa na nụ shaky videos, n'okpuru window ga-apụta. Oge a usoro na-ewe na-adabere na video ogologo. Oge ga-aba ma ọ bụrụ na video bụ ogologo.
Mgbe ị na-egwu nyochaa video si Omume Browser, ọ na-ekere na mbụ na-enweghị smoothing clip ngagharị. Ọ bụrụ na ị na-egwu vidio na oru ngo nchọgharị ọ ga-egosi na stabilization.
Atụmatụ: emekarị a red squiggly akara underlines video na-egosi na a video bụ kwa shaky ime ka iku. Na-egwu a clip gbasie ike a oru ngo, ị kwesịrị ị na-ewepụ ihe niile na akụkụ mata na a red squiggly akara.
Olee otú mbubata VOB ka iMovie?
iMovie VS ikpeazụ ịkpụ pro, nke otu ihe ọma n'ihi na ị
> Resource> iMovie> Olee otú iji akawanye shaky Videos na iMovie